Das Blaue Haus, Eschfeld, i-Eifel
Unique modernist villa kwilali encinane Eifel nature park, kunye negadi ephangaleleyo (2000 m2). Kuwo wonke umntu othanda ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ihashe okanye ukuphumla nje. Ixhotyiswe ngokupheleleyo. Isauna ye-infrared, itafile yentenetya yetafile, iWifi, iTV yesathelayithi.
Isiseko esifanelekileyo sokuphononongwa ngakumbi kwe-Eifel. Ifanele abantu abayi-8. Imizuzu eyi-10 ukusuka eDreiländer Ecke (Du-Lux-Be), eLiège, Trier 60 imizuzu yokuqhuba. Ebusika i-skiing eSchwartzer Mann yimizuzu engama-20 kuphela ngemoto.
I-Das Blaue Haus ibizwa ngokuba yi-lavender-blue blue facade egqitywe ngeplanga, enika indlu umlingiswa wayo owahlukileyo.
Indlu ilungiswe kakuhle, onke amagumbi kunye namagumbi okuhlambela akwinqanaba elifanayo, elinika amava omhlaba kakhulu ngaphandle kokungena ngendlela yomnye nomnye.
Indlu inkulu ngokwaneleyo ukubhiyozela iholide kunye neentsapho ezininzi (abantu abayi-8), okanye ukuyisebenzisa njengendawo yokuhlangana ngeenjongo zoshishino.
Ngaphezulu nje kweeyure ezi-3 ukusuka e-Utrecht. I-Eifel inomlinganiswa onenduli enezityalo ezininzi eziluhlaza kunye namahlathi. Le lali ikwiNaturpark, kwaye inezolimo ezincinci kufutshane nemida yaseBelgian kunye neLuxembourg. Ulwakhiwo lwendlela yebhayisekile entle yakhiwe kwindawo kwindlela kaloliwe yangaphambili. Ngokuyisebenzisa uthintela amathambeka ngamanye amaxesha.
Ukutya ngaphandle kutshiphu. Iindawo zokutyela zinokufumaneka:
I-Pronsfeld: I-pizzeria kaMario.
Prüm: Alte Abtei, kodwa nantsi ezinye iindlela ezininzi onokukhetha kuzo.
Ngexesha lokuhlala ndifumaneka ngefowuni kwinombolo 0031641264892.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$849